माघ ८, २०७८ ०४:२८:४७
मुख्यमन्त्री पौडेललाई हाम्रो प्रश्न: अहिले सम्मको प्रगति के ? राजधानीको टुङ्गो कहिले लाग्छ ? बिधुतिय बस कहिले गुड्छ ? तीन नंम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको ११ महिना पुगेको छ । ११ महिनामा प्रदेश सरकारले बनाउने नियमावली र कानुनहरु निर्माण गरिएको छ । यस प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयमा कर्मचारी देखि मन्त्री सम्मले काम पनि गरिरहेका छन् । तर प्रदेशभरका नागरिकले भने प्रदेश सरकारले गरेका कामको अनुभुति भने अझै लिन पाएका छैनन् । माघ २, २०७५
कानुन बिपरित कर उठाउनेको अनुदान रोक्छौं : मुख्यमन्त्री (सुन्नुहोस् कुराकानी ) तीन नंम्बर प्रदेश सरकार गठन भएपछी कानुन निर्माणको काम प्राथमिकताका साथ काम अघि बढिरहेको छ । यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले द्रुतगतिमा कानुनका काम गर्न निर्देशन पनि दिईसक्नुभएको छ पुष १३, २०७५
मकवानपुरमा करिब ८ हजार मात्र घर पुनःनिर्माण भए, कहिले सम्म बनिसक्छ घर? (कुराकानी ) भुकम्पपछी मकवामनपुरमा ७ हजार ८ सय ३५ घर पुन निर्माण भएका छन् । भुकम्पले ढलेका करिब ३३ हजार घर मध्यमा करिब आठ हजार वटा मात्र घर निर्माण भईसकेका हुन् । पहिले पुन निर्माणले गति नलिएपनि अहिले जनप्रतिनिधि आएपछी घर निर्माणले अली बढी गति लिएको छ । पुष १३, २०७५